စနေမိုးနှင့်တနင်္ဂနွေအလွမ်း | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
February 3, 2008, 9:37 am Filed under: Poems စနေမိုးနှင့်တနင်္ဂနွေအလွမ်း
စာသားလေးတွေမိုက်တယ်ဗျို့…ဟိုတုန်းက သီချင်းစာသားလေးကိုသွားသတိရတယ်…အမေ့ရဲ့ အိပ်ယာဝင်တေးလေးပါ…“ အခုလိုမိုးလေးညို့တော့ချစ်တဲ့သူကို ပိုသတိရတယ်” တဲ့… မိုးအနံ့အသက်နဲ့အတူ မြေသင်းနဲ့လေးရတော့ ဇာတိမြေလေးကို အရမ်းသတိရတယ်ဗျာ… ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ ညီမလေးရေ…။
February 3, 2008 @ 2:22 pm Reply	လင်းလက်ရေ မိုးစက်တွေအကြားက ညီမလေးရဲ. ပိုးစိုးပက်စက် အလွမ်းတွေကို လာဖတ်သွားတယ် လွမ်းတတ်သူတို့ အတွက်တော့ မိုးဟာလွမ်းစရာပဲ မလွမ်းတတ်သူတို့ အတွက်တော့ ထီးမပါလာတဲ့အချိန်မိုးရွာရင် မိုးကို မုန်းမိတယ် ညီမလေး
February 4, 2008 @ 12:36 am Reply	ခုတလော…လင်းလက်စာတွေ၊ကဗျာတွေက အလွမ်းရနံ့တွေနဲ့။ ညီမလေးရေ…လိုချင်တာတွေကို တဆင့်ချင်း ကြိုးစားပေါ့။ ချစ်သူကောင်းနဲ့သားသမီးကောင်း ပြိုင်တူဖြစ်ဖို့ဆိုတာ နဲနဲတော့ရုန်းကန်ရတယ်။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
February 4, 2008 @ 10:04 am Reply	ကဗျာလေး အရမ်းထိတယ် ညီမလေးရေ။ စာသားလေးတွေ အရမ်းကောင်းတယ်။
February 5, 2008 @ 5:11 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI